नेपाल शिक्षक संघ द्वारा नगरपालिकालाई सुझाब - Mero Pradesh
६ असार २०७९, सोमबार meropradesh
रामेछाप । नेपाल शिक्षक संघले मन्थली नगर प्रमुख लव श्रेष्ठलाई सुझाब पत्र बुझाएको छ । शिक्षक संघले नगरपालिका भित्रको बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन बिभिन्न २१ बुदे सुझब पत्र नगरपालिकालाई बुझाएको छ । सिकाई उपलब्धि अभिबृद्धि तथा समग्र शैक्षिक उन्नयनका बिषयमा कार्यक्रम र योजनाह? समन्वय,सहकार्य र हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा संघ पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने कुरा पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
सुझाब पत्रमा नगरको बार्षिक कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्रथाकिमतामा राखि सोही अनुसारको बजेट ब्यवस्थापन गनुपर्ने, प्रवि निमाबि र माबि तहमा कार्यरत बिद्यालय सहयोगी कार्यकर्ता, वालबिकास शिक्षकको सेवा सुबिधामा भएको बिभेदलाई हटाई उनीह?को सेवा सुबिधामा एक?पता कायम गर्नुपर्ने लगाएतका २१ बुँदाह? समेटिएका छन् ।
शिक्षक संघ नगर कार्य समितिका अध्यक्ष भिम बहादुर नेपालीको नेतृत्वमा मन्थली नगरपालिकाको कार्यालय पुगेको टोलिले नगर प्रमुख श्रेष्ठ लाई उक्त पत्र वाचन गरी सुनाएर बुझाएको हो । पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले शैक्षिक क्षेत्रलाई आफुले पनि पहिलो प्राथमिकता राखेको र शिक्षा सँग सम्बन्धित पेशागत संघ संगठनह? सँगको समन्वयमानै नगरले गर्ने हरेक शैक्षिक गतिबिधिह? अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभएको छ ।
स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न नहुने कार्य
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार May 27, 2022 mero